Saraakiil ciidan oo ku wajahan magaalada Marka iyo arrimo xasaasi ah oo ka hadli doonaan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Saraakiil ciidan oo ku wajahan magaalada Marka iyo arrimo xasaasi ah oo ka hadli doonaan
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose ay gaaraan saraakiil ciidan oo ka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, iyadoona uljeedka socdaalkooda uu yahay sidii ay usoo indho-indheyn lahaayeen amniga guud ee magaaladaasi.
Saraakiishaasi ayaa la filayaa inay kulamo la qaataan saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka ku sugan halkaas.
Kulankoodii ayaa sidoo kale waxay kaga hadli doonaan arrimo ku saabsan nabad-galyada iyo tayeynta ciidamada ku sugan magaalada Marka, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay gacan isku dhiib ah ku jirtay.
Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Marka ayaa inoo sheegay in qorshaha saraakiishaan kusoo wajahan magaalada Marka, ay tahay sidii loo xoojin lahaa ciidamada ku sugan halkaasi, si aysan markale u dhicin inay xarumahooda faarujiyaan.
Si kastaba ha ahaatee, socdaalka saraakiishaan ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaantaan magaalada Marka ay muddo laba maalmood ah maamulayeen Xarakada Al-shabaab kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi mudooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku haayay.